TINDER မှာအအောင်မြင်ဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုငါနဲ့ဘယ်သူမှမလိုက်ဖက်တာလဲလို့မေးခဲ့တယ် - သတင်း
Jazz Egger ၌သင်၌ Tinder ပွဲများရှိသည်။ စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါနှင့် - Jazz Egger တွင်မည်သည့်သူထက်မဆို Tinder ပွဲများရှိသည်။ တကယ်တော့၊ Jazz Egger ကသူမဖြစ်မယ်ထင်သည် Tinder တွင်အလိုက်ဖက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
သြစတြီးယားမှမွေးဖွားသည့်လန်ဒန်အခြေစိုက်မော်ဒယ်သည်လူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည် ငါးတစ်ခွဲခွဲ အက်ပလီကေးရှင်းရှိသူများသည်သူမကမ္ဘာ့စံချိန်ကိုရနိုင်ပြီဟုသူမ FEMAIL သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
J A Z ကို Z G, G, G R ကိုအားဖြင့်တင်ခဲ့သည်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ???? 11:18 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 29, 2016 ရက်တွင် (@jazzegger)
ကံကောင်းတာကကျနော်တို့ Tinder ရဲ့ဘုရင်မဆီကိုသင်မေးချင်သောလောင်သောမေးခွန်းများကိုမေးရန် Jazz ကိုကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါတယောက်တည်းသေ ဦး မည်လော။
မင်္ဂလာပါဂျက်ဇ်ဂီတ - မင်း Tinder မှာတော်တော်ကောင်းတယ် သငျသညျအစဉျအမွဲကိုစတငျခဲ့ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးဖွင့်လှစ်လိုင်းကဘာလဲ?
ဖွင့်လှစ်ရန်နီးပါးအမြဲတမ်းအလုပ်မလုပ်သောတစ်ခုမှာသူတို့၏ Tinder ပုံ၏နောက်ခံဇာတ်လမ်းများကိုမေးရန်ဖြစ်သည်။
#milkstudios @ မတ်မတ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်း
J A Z ကို Z G, G အီး R ကိုတင်ခဲ့သည်တစ် ဦး ကဓာတ်ပုံကို ???? 7:07 pm တွင် PDT မှာမေလ 21, 2016 တွင် (@jazzegger)
ရွှေစည်းမျဉ်းများ - နေကာမျက်မှန်များ၊ အုပ်စုဖွဲ့၍ မရသည့်ပထမဆုံးပုံဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံးအားလေးလံသောစစ်ထုတ်စက်များ၊ အရည်အသွေးနိမ့်သောရိုက်ချက်များ၊ မိန်းကလေးများနှင့်ဓါတ်ပုံများမထားပါနှင့် (သူကလိင်တူချစ်သူမဟုတ်လျှင်) နှင့်သင်၏ပရိုဖိုင်းတွင်ဓာတ်ပုံ ၂-၃ ခုလောက်အနည်းဆုံးရှိသည်။
လတ်ဆတ်သော #digitals? #polas
J A Z ကို Z G, G, G R ကိုအားဖြင့်တင်ခဲ့သည်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ???? 3:37 pm တွင် PDT မှာဇွန် 7, 2015 တွင် (@jazzegger)
သငျသညျ app ကိုအပေါ်အရှိဆုံးလိုက်ဖက်မိန်းကလေးတစ် ဦး ပါပဲ။ မိန်းကလေးတစ် ဦး သည်ပွဲစဉ်များရရန်အကောင်းဆုံးပုံများကားအဘယ်နည်း။
မျက်နှာ၏အနီးကပ်ရိုက်ချက်များသည်ခန္ဓာကိုယ်အပြည့်အ ၀ ရိုက်ခြင်းများထက်ညာဘက်ကိုပွတ်ဆွဲရန်ပိုများသည်။
ကျွန်ုပ်၏ #banana ဖုန်းအသစ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်အားခေါ်ဆိုပါ။
J A Z ကို Z G, G, G R ကိုအားဖြင့်တင်ခဲ့သည်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ???? (@jazzegger) ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နံနက် ၁၀:၂၅ နာရီ၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့ထားပါ။ သင်ကြိုးစားရန်ကြိုးစားနေသည်နှင့်မတူပါစေနှင့်။
ဒီတော့ဒါက Tinder ပရိုဖိုင်းဖြစ်တယ်။
တစ်စုံတစ်ဦးက Facebook Messenger အပေါ်တက်ကြွစွာအခါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ
ဒါဟာ buddy နေကာမျက်မှန်ပါပဲ။ ဒါဟာနေကာမျက်မှန်ပါပဲ။
ဟားဟား။ ကောင်းပြီ၊ မင်းရဲ့ပုံရဲ့အရည်အသွေးကအတော်လေးနိမ့်တယ်။ မင်းတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်လုံးတွေကိုငါတို့မမြင်နိုင်ဘူး။ ဒါ့အပြင်သင်ဟာဟာဝိုင်ယီပုံနှိပ်နဲ့အားလပ်ရက်တွေမှာလူကြိုက်အများဆုံးလူရမ်းကားတစ်ကောင်နဲ့တူတယ်။
ဖြစ်နိုင်စရာ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အလျင်အမြန်မီးထိုးခြင်း - ခွေးနှင့်ဓာတ်ပုံများရှိသောယောက်ျားများကိုသင်မည်သို့ထင်သနည်း။
ကောင်းပြီ၊ ဒါကဖေဖေသတိပေးချက်လို့ဆိုလိုတယ်။ ဒါကြောင့်သူကသူ့ကလေးမဟုတ်ရင်သူကချစ်စရာကောင်းတဲ့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်မဖြစ်နိုင်တာကလုံခြုံဖို့ပဲ။
photoshop lvl 7000 / sorry @robertsakowski ကိုမင်းရဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအလုပ် xx ကိုဖျက်ဆီးပစ်တဲ့အတွက် (#truthbehindthisshot မှကျွန်တော့်အေဂျင်စီကထိုနေ့မှာကျွန်တော့်တင်ပါးကကျယ်လွန်းတယ်၊ လန်ဒန်ဖက်ရှင်အပတ်မှာအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ငါကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ်။ ) ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျသောကြောင့်အလေးချိန်မကျရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် LFW အတွက်အတည်ပြုထားဆဲဖြစ်သည်။ )
J A Z ကို Z G, G, G R ကိုအားဖြင့်တင်ခဲ့သည်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ???? (@jazzegger) နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်၊